Ukuphupha iCockroach Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iphela kunqabile ukuba lize lodwa. Iphela lihlala kumaqela amakhulu kwaye, ukuba lifunyenwe ngaphakathi, izinambuzane ezirhubuluzayo zinokuba sele zihleli kuyo yonke indlu. Ke ingcali kuphela inokukunceda.
Iphela litya phantse yonke into egaywayo ngohlobo oluthile: ukutya okubolileyo, amalaphu, ulusu kunye nephepha. Inokudlulisa izifo ezinzulu, kodwa oku kunqabile ukuba kwenzeke kwi-Yurophu Ephakathi ngenxa yemigangatho ephezulu yezempilo. Ukongeza, ilindle lezilwanyana, kunye nolusu kunye neentsalela zamathe, zihlala zingunobangela wokungezwani komzimba.
Ukuba amaphela okanye amaphela avela ephupheni, ukuzibona ngokuqinisekileyo kubangela ukuzotheka ephupheni, ngokunokwenzeka kukothuse. Uziva ungcolile kwaye ufuna ukususa oononkala ababi ngokukhawuleza, ngokufanayo nooqongqothwane okanye iimbovane ezingenakubalwa. Bambalwa abantu ababonisa umdla ngovuyo kwesi sinambuzane kungekuphela nje ekuvukeni ubomi, kodwa nakwi el mundo yamaphupha, amchukumisa kakhulu okanye ayikhathalele indlela yakhe yobomi. Ininzi ibonwa njengesibetho.
Kubalulekile ukutolikwa kwephupha nokuba ingaba inkathazo yokugcina ivele yodwa okanye kwimihlambi emikhulu, kuba ngokufanelekileyo, intsingiselo yokomfuziselo yeqhude liyatshintsha. Ukongeza kwiphela, ezinye izinambuzane zihlala zifumaneka emaphupheni, ezinje ngeentshulube, intakumba okanye amanundu ahlukeneyo. Zonke ezi zilwanyana zibangela ukuziva uzothekile ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwamaphupha, uphawu lwephupha "umqhagi" lubonisa ubunzima obubonakala ngathi abunakoyiswa bubuthongo ngeli xesha. Njengezilwanyana ezinenkani, awuyi kuzisusa ngokulula nazo. Ukuba ubulala iphela ephupheni, oku luphawu lokuba lusondele. Ukupheliswa kwiingxaki. Njengoninzi lwezinambuzane, iphela likwabangela ukuziva uzothekile ebuthongweni njengomthetho; njengomqondiso wephupha elihlala libonisa Uxinzelelo phantsi. Ukuphupha akuvakali kulusu lwakho.
Enye into sisikrweqe esomeleleyo sokukhusela iphela, ekucaciseni kwamaphupha luphawu lwesimo esingashukumiyo ebomini. Umphuphi kufuneka abeke esweni imeko yakhe yezimvo ezingqongqo kwaye zimiliselwe ngokuqinileyo, azilungise xa kukho imfuneko, kwaye abe bhetyebhetye.
Kwinguqulelo edumileyo yamaphupha, uphawu lwephupha "iphela" limela ubuqili obolukelwe ngamaphupha. Njengezinambuzane, nomsebenzi wazo nawo Iintshaba ngokufihlakeleyo ngokuchasene naye kunye nezinto anomdla kuzo. Kwindawo yaseYurophu, iphela libonwa ephupheni kunokuba luphawu lwamathuba amahle ophuhliso lwangaphandle.
Ngamanye amaxesha isimboli yephupha ikwangumqondiso wenye. Umtshato kwaye uqale elakho ikhaya.
Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolikwa kwengqondo
Iphela luphawu lwephupha Iingxaki y uloyikoathi ngequbuliso engalindelekanga aphume ebumnyameni. Bafuzisela ukutolikwa kwamaphupha ngokwasemphefumlweni ngezinto ezichaphazela ukuqonda kwethu.
Ngokukodwa, ukuba iphela alibonakali lodwa ephupheni, kodwa izilwanyana ezininzi ziphuma egumbini okanye enye into yemihla ngemihla ngokungalindelekanga, uphawu lwephupha kufuneka luqondwe njengefowuni engxamisekileyo evela emphefumlweni. Mhlawumbi ukuphupha kunengxaki yokoyika okungaphumi engqondweni, kodwa esiswini.
Njengombhalo owahlukileyo, iphela liqulathe imicimbi ecinezelweyo okanye ukutolikwa kwamaphupha. Ukuziva unetyala. Ukuphupha kuqhutywa liphupha ukuze ufumane iimvakalelo zakho kunye namava akho.
Isimboli yephupha ikwanokubonisa iimvakalelo zokungancedi okanye ukoyika ukungabaluleki. Iflegi ebomvu liphela ekuchazeni iphupha, xa uninzi lwezi zinambuzane luphuma emzimbeni ephupheni. Yintoni ecinezelayo iphupha likulawula ngokokude ube nokudakumba.
Ayifanelanga ukuba njalo, ungakhathazeki, cinga nje ukuba kunokwenzeka. Ukuba uziva ungenanto ngokusisigxina, ukhuthazekile kwaye ulusizi ngokungapheliyo, kuya kufuneka ubonane nogqirha. Nokuba amaphupha anje aqhele ukwenzeka, kufuneka kufunwe uncedo lwengqondo.
Uphawu lwephupha «iphela» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lwamaphupha, uphawu lwephupha "iphela" likwinqanaba lokomoya ukubonakaliswa kwemetamorphosis, ukuvuselelwa ngokomoya. Ephupheni, iphela libonisa xa uphupha ukuba ubomi abulindelwanga. mathuba unikeza xa uyijonga ngokweendlela ezahlukeneyo.